January 27, 2021 - ApannPyay Media
ကာဘော််လစ်နှင့် မျက်နှာသစ်ဖြစ်နေသူများအတွက်် သတိပြုဖွယ််
ကာဘော််လစ်နှင့် မျက်နှာသစ်ဖြစ်နေသူများအတွက်် သတိပြုဖွယ်် အပီီအပြင် ငြင်းနေကြလိို့ ချက်ကျ လက်ကျပဲပြောပါမယ် ကာဘော််လစ် ဆပ်ပြာကို မျက်နှာလုံးဝမတိုက်ပါနဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာအသားရည် ကိိုယ်တန်ဖိုး ထားရင်ပေါ့ တိိုက်နေတဲ့သူတွေလဲ လာမငြင်းပါနဲ့ဆက်တိုက်ပါ ကာဘော်လစ်ဆပ်ပြာမှာ ကာဘော်လစ်အက်စစ်ပါဝင်တဲ့အတွက်မျက်နှာအသားရည်ကိုပျက်ဆီးစေရုံသာမက မျက်ကြည်လွှာထိခိုက်စေပါတယ် carbolic အက်စစ်က နုနယ်တဲ့မျက်နှာအသားရည်ကိို အက်စစ်ဓာတ်သဘောအရ စားပစ်လိိုက်လို့စသုံးသုံးပီး ၁ လ ၂ လလောက်ထိ မျက်နှာက ဖြူ လာပီး ok သယောင် ဖြစ်နေပါလ်ိမ့်မယ်် အဲ့နောက်ပိုင်း Normal skin သမားတွေ တိုက်ရင် အရည်ပြားပါးလာပီး sensitive skin အဖြစ်သို့တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲသွားပါမယ် dry skin သမားတွွေ ပိုပီး အသားရည်် ခြောက်ကပ်လာမယ် oily skin သမားတွေ ရေဓာတ်ခန်းလာမယ်် sensitive skin … Read more
အိမ်တောင် လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ်မှန်..
အိမ်တောင်လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား…? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား …? စသဖြင့် အမှတ်မထင် ဆရာကြီး(စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း)၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဆိုလိုရင်း အမှန်ကို သိရတော့သည် ။ ဘူးပင်ကို အိမ်ဝင်းများအတွင်း မိုးအခါ စိုက်ပျိုးတတ်သည် ။ ဆောင်းအခါတော့ ကိုင်းဘူးပေါ့ ။ မိုးတွင်း လေတိုက်ခတ်ရာ အရပ်မှာ တောင်လေ၊ အနောက်တောင်လေများ တိုက်ခတ်ပါသည် ။ ဘူးပင်သည် နေ့အခါ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး အောက်စီဂျင်ကို ထုတ်ပါသည် ။ ည အခါတွင်မတော့ အောက်စီဂျင်ကို ရှူသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသတဲ့ … Read more
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါ.
နေပြည်တော် ခရီးသို့အသွား လမ်းခုလတ် တွင် နေပူပူ ထဲမှာ ကိုရင် ငယ်လေးတစ်ပါး လမ်းကြုံလိုက်ဖို့ ကားတားနေတာ မြင်နေတာ နဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးကားပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် တခြားကားတွေကလည်း လူအပြည့် ဆိုပြီး မရပ်ဘူး ဒကာကြီးရယ်တဲ့ ကိုရင်လေး ကားတားနေတာ ၂နာရီကျော်ကြာပြီတဲ့ ဒါနဲ့ ကိုရင်လေးကို ဘယ်ကျောင်းကလဲ ဘွဲ့နာမည် ဘယ်လိုမှည့်ခေါ်ပါသလဲ ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ကာ သွားလိုတဲ့ ခရီး စဉ်မေးကြည့်တာ့ သံဃာ ၄၅ ပါးရှိတဲ့ တောရကျောင်းက ပါတဲ့ စာဝါ လိုက်ဖို့ ကျောင်းထိုင်ဆရာ တော် က စာအုပ် ခဲတံ များအတွက် မယ်တော်ကြီး ဆီ ပြန်အလှူ ခိုင်းလို့ ရွာ ပြန်အလာ ရွာရောက်တော့ မယ်တော်က တခြားနယ် ဘက် … Read more
သာဓုခေါ်သင့်တဲ့ ကြည်နူးစရာ အလှူလေးမို့ ဝိုင်းအားပေးလိုက်ကြပါဦး ကျွန်မက ညည့်နက်တဲ့ အထိ အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်လေတော့ ည ၉ နာရီ ၁၀ နာရီဆို ခဏနားပြီး ဝရံတာကနေ အမြဲ ရွှေတိဂုံ ဘုရားဖူးရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လေ့ရှိတယ်.. ခုနေတဲ့နေရာက နေရာသစ်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်မိတိုင်း ကျွန်မ မြင်ကွင်းထဲအမြဲရောက်လာတာ အပေါ်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင် စားမဲ့သူ မရှိတဲ့ ဆိုင်လေးရယ်, ထိုဆိုင်ပိုင်ရှင် လင်မယားရဲ့ စာလုပ်နေတဲ့ ကလေးလေးရယ် ကျွန်မ တွေ့ရတယ်.. သွေးမတော် သားမစပ်ပေမဲ့ မီးမှိန်မှိန်အောက်က စျေးမရောင်းရတဲ့ မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်း ကျွန်မ ရင်ကို ထိစေတယ်.. ဆိုင်လေး ကတအားစုတ်နေတော့ စားမဲ့သူနည်းတာထင်ပါရဲ့.. ငါဘာလုပ်ပေးရမလည်းဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အတူ နောက်နေ့ သူတို့ ဆိုင်ထွက်ချိန် ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ ဘာမှ … Read more
ဒီဟာတွေလုပ်မိရင် တစ္လကေန ၃လအထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်
ဒီဟာတွေလုပ်မိရင် တစ္လကေန ၃လအထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ် (၁)အိပ်ယာနောက်ကျမှထခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့။ (၂)မနက်ပိုင်းကို ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ (၃)အိပ်ယာထထချင်း မျက်နှာအရင်တန်းသစ်ပါ အစားအရင်စားတာ အိမ်သာတန်းတက်တာ မလုပ်ပါနဲ့ (၄)ဘုရားအရင်ရှိခိုးပြီးမှ အလုပ်ကိုစလုပ်ပါ (၅)ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားတာမျိုး လိပ်ထားတာတို့ ပစ်စလခက်မထားပါနဲ့။ (၆)စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါ သူများကို အတင်းပြောတာ ပုတ်ခပ်တာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့။ (၇)အနောက်အရပ် မြောက်အရပ်တွေကို ခေါင်းပေးပြီးမအိပ်မိပါစေနဲ့ (၈)ဖိနပ်အဟောင်းတွေ ထီးအပျက်တွေ နာရီအပျက်တွေ အိမ်မှာမထားပါနဲ့ (၉)ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ဘောပင်နဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် မရေးပါနဲ့ (၁၀)ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါးကိုလုံးဝ မပစ်မှားမိပါစေနဲ့ မစော်ကားမိပါစေ (၁၁)တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တော့ အသားငါးမစားပါနဲ့ သက်သက်လွတ်စားပါ။ (၁၂)အိပ်ယာထထချင်း ဖုန်းသုံးတာ ဖုန်းပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ မျက်နှာအရင်သစ်ပါ။ (၁၃)မနက်ပိုင်း ဘယ်သူကိုမှငွေမချေးပါနဲ့ (၁၄)မနက်ပိုင်း အရက်သောက်တာ မလုပ်ရပါ (၁၅)ငွေတွေကို ဖိနပ်နဲ့ထိတာ ထမိန်နဲ့ထိတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့ … Read more
အဘိုးကြီးရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာတင်ကွဲခဲ့ရတဲ့လင်မယား လက်ထပ်ပြီးတာမကြာသေးသောလင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေးလူလုထိုင်စကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအဘိုးကြီးတယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ် မိန်းမဖြစ်သူက ဘကြီးအိမ်လိပ်စာမေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ဟု ထိုင်ရာကထသွားတော့ အဘိုးကြီးကဒီလိုပါသမီးရယ် “ဘကြီးပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့ ” အဘိုးကြီးက ထိုမျှသာပြောကာ သူတို့အိမ်ရှေ့က ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေရာ … မိန်းမဖြစ်သူမှာ ဘာကိုနားလည်ရမှန်းမသိဘဲ သူ့ယောက်ျားဘေး ပြန်လာထိုင်လေသည် “မိန်းမ ဟိုဘကြီးက ဘာပြောသွားတာလဲ” “အော် သူပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့” “အေးလေ ဒါတော့ဒါပေါ့ ဒါပေမဲ့ မင်းနဲ့ငါက ချစ်လို့ယူထားတဲ့လင်မယားဘဲ ငါ့တော့ပြောပြ သင့်ပါတယ်” ” အင်းပါမောင်ရဲ့… ဘကြီးကသူပြောတာ ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့တဲ့” “မဟုတ်သေးဘူးလေကွာ တခြားသူတော့မပြောနဲ့ပေါ့ငါ့ကမင်းလင်လေ ငါ့ကိုတော့ မင်းမပြောဘဲနေလို့ရမလားဘာလဲ.. ဒီအဘိုးကြီးက မင်းနဲ့မကင်းမရှင်းဖြစ်ဘူးလို့လား…” “ရှင်နော် စကားပြောရင်ကြည့်ပြော လူကိုမစော်ကားနဲ့ အဲဒီဘကြီးက သူပြောတာ … Read more
လက်သည်း မှိုဝင် ၊ ပိုးဝင်ခြင်းတို့အတွက်
လက်သည်း မှိုဝင် ၊ ပိုးဝင်ခြင်းတို့အတွက် လက်သည်းခြေသည်းမှိုစွဲခြင်းရောဂါ လက်သည်းခြေသည်း မှိုစွဲခြင်းရောဂါဟာ မှို ရောဂါကူးစက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး အဖြစ်များတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါခံစားရပြီဆိုရင် လက်သည်းတွေက အရောင်ပြောင်းလာခြင်း. ထူထဲလာခြင်း ပွယောင်းလာခြင်း ပုံပျက်ပန်းပျက် ဖြစ်လာခြင်း … အချို့သောလူများတွင် အနံ့ဆိုးအနည်းငယ်ထွက်ခြင်း နာကျင်ခြင်း စတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားလာရမှာဖြစ်ပါတယ် အလွန်ပဲ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ရန်လွယ်ကူပြီး ခြေချောင်းတစ်ခုရဲ့လက်သည်းမှာ မှိုစွဲပြီးချက်ခြင်း မကုသရင် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း အခြားခြေချောင်းတွေသာမကလက်သည်းတွေကို ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးဝါးတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ အများကြီးမရှိပေမယ့် လက်သည်းဆိုတာလူမြင်သူမြင်နေရာမို့အမြင်ဆိုးစေပါတယ်။ လက်သည်းခြေသည်းမှိုစွဲခြင်းရောဂါကို တနည်းအားဖြင့် Onychomycosis လို့ခေါ်ပြီး ရေနဲ့အမြဲထိတွေ့နေရသူများ… ဥပမာ- အဝတ်လျှော်သူများ ရေငုတ်သမားများ တံငါသည်များ.သက်ကြီးရွယ်အိုများ.ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ ခြေဆီလက်ဆီလက်ဆီထွက်လွန်းသူစတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ် အချိန်မီကုသမူမခံယူပဲထားရင်တော့ ခြေသည်းလက်သည်းလုံးဝပျက်စီးသွားခြင်း ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါရှိသူများတွင် ရောဂါပိုးဝင်ပြီးပြည်တည်နာဖြစ်ခြင်း စတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းမှိုစွဲသူများအနေဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရန် ၁ … Read more